Disney အပြည့်အဝသွန်းဖော်ပြသည် Star Wars Obi-Wan Kenobi စီးရီး
Disney Obi-Wan Kenobi ၏အကန့်အသတ်ရှိသောပွဲစဉ်များကိုသရုပ်ဆောင်မည်
29 / 03 / 2021 29 / 03 / 2021 ခရစ် Wharfe 1218 Views စာ0မှတ်ချက် Mustafar အပေါ် 75269 Duel, နတ်သမီး, Benny Safdie, Bonnie Prisse, Disney, Disney+, Ewan လို့ McGregor, Hayden christensen, ယောလ Edgerton, Lego, Lego Star Wars, Obi-wan kenobi, အဆိုပါ Sith ၏လက်စားချေ, ဆီမွန် Kessell, Star Wars, Star Wars: Clone ၏တိုက်ခိုက်မှု
အဆိုပါ Obi-Wan Kenobi များအတွက်အပြည့်အဝသွန်း Disney+ စီးရီးများကိုထုတ်လုပ်မှုမတိုင်မီကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
အဆိုပါလာရောက်ပူးပေါင်း အတည်ပြုပြီးသား Obi-Wan အဖြစ် Ewan McGregor နှင့် Anakin Skywalker အဖြစ် Hayden Christensen တို့မှာ Joel Edgerton နှင့် Bonnie Piesse တို့ဖြစ်သည်။ သူတို့က Owen နှင့် Beru Lars တို့၏ Cloon and Revenge of of the Clones and Revenge သံSာ.
ကျန်သရုပ်ဆောင်များကို Mus Ingram၊ Kumail Nanjiani၊ Indira Varma၊ Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr. Sung Kang, Simone Kessell နှင့် Benny Safdie တို့ကသရုပ်ဆောင်ထားသည်။ သူတို့ကစားမည့်သူနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်စကားလုံးမှမရှိသေးပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်နဂါးငွေ့တန်းကိုထပ်မံဖြည့်တင်းရန်အသစ်စက်စက်ဇာတ်ကောင်အမြောက်အမြားကိုတွေ့မြင်ရဖွယ်ရှိသည်။
Obi-Wan Kenobi ကိုအထူးအဖြစ်အပျက်စီးရီးအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည့်အတွက်ဖြစ်စဉ်အရေအတွက်အတိအကျကိုအတည်မပြုရသေးသော်လည်းရာသီဥတုအခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒီပြပွဲကိုorပြီလမှာစတင်မှာဖြစ်ပြီး Mandalorian ဇာတ်လမ်းတွဲနှစ်ခုကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Deborah Chow က ဦး ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပေးထားသောကျွန်ုပ်တို့သည်အပါအဝင် Mandalorian ကို အခြေခံ၍ အစုံအလင်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည် 75292 အဆိုပါ Mandalorian Bounty Hunter သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး နှင့် Tatooine အပေါ် 75299 ပြTroနာ ငါတို့နောက်ဆုံးမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခြင်းသည်မဆင်ခြင်နိုင်ပါ Lego Obi-Wan Kenobi စီးရီးအပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ကုန်များ။
ဒီပြပွဲအတွက်အခိုင်အမာထုတ်ပြန်မယ့်ရက်မရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်မင်းက Obi-Wan နဲ့ Anakin တို့ကိုမင်းရဲ့စုဆောင်းမှုထဲကိုနောင်အနာဂတ်မှာထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်မင်းကိုဖမ်းချင်နေမှာပါ။ Mustafar အပေါ် 75269 Duel ရှေ့မှာ ကောင်းသောအဘို့အအနားယူ.
← Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ 76384 Hogwarts Moment: ဆေးဖက်ဆိုင်ရာအတန်းအစားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
နောက်ဆုံးတွင် Beru Lars LEGO အသေးစားရုပ်ပုံကိုရလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည် Disney →